वायुसेवा सञ्चालकहरूले हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
गाडी भाडा घट्यो, कुन रूटमा कति?
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि घटेको छ।
विज एयरले गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट उडान भर्ने
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाबाट आउँदो सेप्टेम्बरमा विज एयरले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने भएको छ।
एअर अरेबिया र फ्लाई दुबईले पनि गौतमबुद्ध विमानस्थलबाट उडान भर्ने भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप दुई विदेशी वायुसेवा कम्पनीले पनि नियमित उडान भर्ने भएका छन्।
गाडी भाडा पनि बढ्यो, कुन रूटमा कति? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै गाडी भाडा पनि बढेको छ।
चौतर्फी विरोधपछि सरकारले भन्यो–साउनदेखि सबै गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य भनेको होइन चर्को आलोचनापछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने विषयमा सरकार केही लचक देखिएको छ।
बागमती र गण्डकीमा साउन १ देखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य सरकारले बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनमा साउन १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने भएको छ।
विमान दुर्घटना: परिवारलाई बुझाइयो मृतकको शव तारा एअरको ट्वीनअटर जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु तथा चालक दलका सदस्यको शव परिवारलाई बुझाइएको छ।
नेपालमा हराएका विमान खोज्न किन हुन्छ कठिन? नेपालमा हराएका विमान खोज्न जहिल्यै कठिन हुने गरेको छ भने एउटा हेलिकोप्टर त हराएको २० वर्ष भइसक्दा पनि अझै पत्तो छैन।
लाइसेन्सका लागि भरेका अनलाइन आवेदन रद्द, फेरि नयाँ भर्नुपर्ने सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)का लागि अहिलेसम्म अनलाइनबाट भरेका आवेदन रद्द गरिएको छ भने अब नयाँ भर्नुपर्ने भएको छ।
हवाई पूर्वाधार विकासका लागि १२ अर्ब २४ करोड विनियोजन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि ढाँचा निर्माण गरी नेपाल लगानी बोर्ड मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने भएको छ।
देउवा सरकारले पनि देखायो रेलमार्ग र जल यातायातको सपना केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले देखाउँदै आएको रेलमार्गको सपना प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि जगाएको छ ।
फेरि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्यो, कुन रुटमा कति? सरकारले दुई महीना नबित्दै फेरि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाएको छ।
आन्तरिक उडान ठप्प पार्ने वायुसेवा सञ्चालकको चेतावनी वायुसेवा सञ्चालकले भोलिदेखि आन्तरिक उडान बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
साझाका नयाँ बिजुली बस अपाङ्गतामैत्री
साझा यातायातले ल्याएका नयाँ बिजुली बस अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहज रूपमा यात्रा गर्न सक्ने सुविधायुक्त छन्।
बागमती प्रदेशमा गाडी भाडा बढ्यो, नयाँ वर्षदेखि लागू हुने
बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौं उपत्यका सहित प्रदेशभर चल्ने सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडा बढाएको छ।
गाडी भाडा बढ्यो, कुन रूटमा कति?
सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायातका साधनको भाडादर बढाएको छ।
बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपत्‌कालीन अवतरण बुद्ध एयरको जहाज भरतपुरमा आपत्‌कालीन अवतरण गरेको छ।
‘यात्रुलाई सोधेरै नेपालगञ्जसम्म लगिएको हो’ ५ मंसीर बिहान ६ः१५ मा काठमाडौंबाट रुकुम सल्लेका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको उडान तय भएको थियो। तर, प्रतिकूल मौसमका कारण निगमले उडान रद्द गर्‍यो।